ယုံကြည်ရလောက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဟူသည် အဘယ်နည်း | Open Election Data Initiative
အပိုင်း ၁။ ရွေးကောက်ပွဲ သမာသမတ်ကျမှု ယုံကြည်ရလောက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဟူသည် အဘယ်နည်း
ယုံကြည်ရလောက်သည့် ရွေးကောက်တစ်ခုတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှု၊ တာဝန်ခံတာဝန်ယူရှိမှု၊ အပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းရှိမှု စသည့် ဝိသေသများရှိရမည်။1
လူပေါင်းစုံပါဝင်နှိုင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲများသည် မဲပေးခွင့်ရှိသူတိုင်းအား ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစိုးရအတွက် ကိုယ်စားလှယ်များတင်မြှောက်ခြင်းတို့၌ ပါဝင်နိုင်ရန် တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးပေးသည်။ ၄င်းပါဝင်ခွင့်မှာ အပြောကျယ်သည့် အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ရကား ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့် ကန့်သတ်မှုမျိုးကိုပင် ဥပဒေကြောင်းဖြင့်သာ ကန့်သတ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံသားများ၏ ပါဝင်ဆင်နွဲမှုကို ဟန့်တားနိုင်သည့် အတားအဆီးများအား အာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် စီစစ်ဖော်ထုတ် ဖယ်ရှားပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ လူမျိုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဘာသာစကား အနည်းစုများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်များ၊ သက်ကြီးနိုင်ငံသားများ၊ မသန်စွမ်းသူများ စသည်ဖြင့် အစဉ်အလာအားဖြင့် ဘေးဖယ်ခံရသည့် အုပ်စုများ ရင်ဆိုင်ရသည့် အတားအဆီးများအား ဖယ်ရှားပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဥပဒေကြောင်းအရ ကန့်သတ်မှုများရှိပါကလည်း ထိုကန့်သတ်မှုများသည် မဲပေးနိုင်ရန် သို့မဟုတ် အရွေးခံရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အငယ်ဆုံးအသက်အရွယ် အပိုင်းခြား သတ်မှတ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကျဉ်းမြောင်းသည့် အကန့်အသတ်မှုမျိုးများသာ ဖြစ်သင့်သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဟူသည် ၄င်း၏တစ်ဆင့်ချင်းစီအား စိစစ် စစ်ဆေးနိုင်ရန်လမ်းဖွင့်ပေးထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်အား တိတိကျကျနှင့် သမာသမတ်ကျကျ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် သီးခြားအတည်ပြုပေးနိုင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲမျိုးဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မူ သည် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် ပြည်သူများ၏ သတင်းအချက်အလက် ရှာဖွေခွင့်၊ လက်ခံခွင့်၊ ဝေမျှ ခွင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့ပြင် ပြည်သူများ၏ အစိုးရအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခွင့်၊ ပြည့်သူ့ရေးရာကိစ္စများတွင် ပါဝင်ခွင့် တို့နှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။2 ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် ဖြစ်စဉ်များသည် စစ်ဆေးမှုအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူများပါဝင်ဆုံးဖြတ် နိုင်ရန် အတွက် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် အခွင့်အလမ်းများရှိရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲစက်ဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သမျှ သတင်းအချက်အလက်များသည် မဲပေးသူများနှင့် ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် လက်လှမ်းမီရမည်။ ပါတီဝင်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် ပါတီစွဲကင်းသည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများအား ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အဆင့်ဆင့်အား စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် အာဏာပေးအပ်ရမည့်အပြင် ထိုအကြောင်းအရာများအပေါ် အနှောင့်အယှက် ကင်းစွာဖြင့် လူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခွင့် ပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲများတွင် တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိခြင်းဆိုသည်မှာ နိုင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေးဖြစ်သော ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်ရေးပင်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ပတ်သက်သူများဆိုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ၊ ရွေးကောက်ပွဲစီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအကျုံးဝင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲများသည် နိုင်ငံသားများအတွက် အစိုးရအား တာဝန်ယူ တာဝန်ခံခိုင်းစေနိုင်သည့် အဓိက နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထိုမျှမကဘဲ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်လျောက်တွင်လည်း တာဝန်ခံ တာဝန်ယူမှုရှိရန် အရေးကြီးသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ဆက်စပ်သည့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများအား ဖြေရှင်းရန် ထိရောက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နည်းလမ်းများလည်း ရှိရပေမည်။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ဆက်နွှယ်၍ အစိုးရလုပ်ရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲစီစဉ်ကျင်းပပေးသူများ၏ လုပ်ရပ်များတွင်လည်း တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုများ ရှိရမည်။ ထို့ပြင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများအား ထိပါးစေသည့် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများအား ဥပဒေအရ အချိန်မီ အရေးယူနိုင်ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အသင့်ရှိနေရမည်။
နိုင်ငံသားများအားလုံး ရွေးကောက်ခံရန်အတွက် သင့်တင့်မျှတသည့် အခွင့်အရေးရှိသည့်အခါ ထိုရွေးကောက်ပွဲအား ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသော ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ပွဲအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံရေးအရ ယှဉ်ပြိုင်မှုသည် ပြည်သူ့ဆန္ဒအား ထင်ဟပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲများ၏ အခရာကျသည့် အစိတ်အပိုင်း တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှု မူ သည် ရွေးကောက်ပွဲ ယန္တရားစက်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးနှင့် ဆက်နွှယ်သည်။ နိုင်ငံသားများ အတူတကွစုရုံးခွင့်၊ ၄င်းတို့အကျိုးကိုယ်စားပြုသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ တည်ထောင်ခွင့်၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်၊ မဲပြားပေါ်တွင် မိမိတို့၏ ပါတီ၊ ကိုယ်စားလှယ်အမည်များ ဖော်ပြခွင့် စသည်တို့အား ဥပဒေမဲ့နှောင့်ယှက်မှု၊ ခြောက်လှန့်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုတို့ကင်းစွာဖြင့် တရားဥပဒေမူဘောင်အတွင်း ခွင့်ပြုထားရမည်။
အဆိုပါ စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို အသေးစိတ် သိလိုပါက Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections: An NDI Guide for Developing Laws and Law Commentaries, Section Two (2008), ကြည့်ပါ။ International Election Principles: Democracy & the Rule of Law (JH Young, ed., American Bar Association (ABA), 2009) စာအုပ်၏ အခန်း တစ် တွင်လည်း ကြည့်နိုင်သည်။ ↩
Merloe, Patrick. “Human Rights – The Basis for Inclusiveness, Transparency, Accountability and Public Confidence in Elections”, in International Principles: Democracy & the Rule of Law (JH Young, ed., ABA, 2009), p. 3, 18-20. ↩